ỤDỊ DATA NA EXCEL - EXCEL - 2019
Na-arụ ọrụ na ụdị data na Microsoft Excel
Ndị njikwa faịlụ bụ ụdị ngwa ngwa bara uru maka iPhone nke na-enye gị ohere ịchekwa ma lee ụdị faịlụ dịgasị iche iche, yana ịbubata ha site na isi mmalite dị iche iche. Anyị na-eme ka uche gị bụrụ nhọrọ nke ndị faịlụ kachasị mma maka iPhone gị.
Onye njikwa faili
Ngwa ngwa nke na-ejikọta ike nke onye njikwa faịlụ na ihe nchọgharị. Enwere ike ịmepe faịlụ PDF, akwụkwọ Microsoft Office, lee ọdịnaya nchekwa, nyefe faịlụ site na Wi-Fi (ma ngwaọrụ abụọ ga-ejikọta na netwọk ikuku), na-akwado akwụkwọ iWorks Apple na nke ọzọ.
Mbupu mbubata n'ime usoro ihe omume a nwere ike ime site na ihe nchọgharị, Wi-Fi, site na iTunes na site na ọrụ igwe ojii mara, dị ka ọmụmaatụ, Dropbox na OneDrive. O bu ihe nwute, enweghi nkwado nke ihe omume a n'asusu Russian, nakwa na mbipute a na-achoghi enwe mgbasa ozi.
Download Njikwa faili
Onye njikwa faịlụ dị ukwuu maka iPhone gị na nnukwu ngwà atụmatụ: ibubata faịlụ sitere na isi mmalite dị iche iche (Wi-Fi, iTunes, ọrụ ígwé ojii, ihe nchọgharị na ngwa ndị ọzọ), ọdịyo na ọkpụkpọ vidiyo nke na-akwado ọtụtụ n'ime ụdị faịlụ ndị a maara nke ọma, nchedo paswọọdụ, nlele akwụkwọ (Okwu, Excel, PDF, ZIP, RAR. TXT, JPG na ọtụtụ ndị ọzọ), nzaghachi nke foto na vidiyo echekwara na iPhone, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ihe na-adịghị mma nke ngwa ahụ gụnyere ntinye ngosi interface kachasị elu, ọnọdụ njakịrị nke asụsụ Russian, na ọnụnọ nke mgbasa ozi intrusive, nke, site n'ụzọ, nwere ike ịgbanarị ngwa ngwa maka obere ego.
Ihe edere 6
Onye njikwa faili nke na-enye gị ohere ịchekwa, egwu ma dezie faịlụ. N'ime atụmatụ ndị dị mma nke Documents, anyị na-ahụ batrị arụ ọrụ nke nwere ike ige ntị na egwu na vidiyo na weebụ ma na-enweghị njikọ na netwọk, mbubata faịlụ site na isi mmalite dị iche iche, ihe nchọgharị-nchekwa, nchebe paswọọdụ, na mmekọrịta akpaka.
Ngwa ahụ nwere interface dị elu na nkwado maka asụsụ Russian. Tụkwasị na nke ahụ, ndepụta ọrụ ọrụ igwe ojii na-akwado ya dị nnọọ ukwuu n'ebe a karịa ngbanwe ndị ọzọ yiri ya.
Download Documents 6
Onye njikwa faili, emejuputa maka nchekwa mpaghara nke faịlụ na ike ile ha anya. Na-akwado ngosipụta usoro ihe odide dị ka faịlụ Microsoft Office, PDF, ihe osise, egwu na vidio, akwụkwọ iWorks na usoro ndị ọzọ.
A na-echekwa data echekwara na Briefcase site na paswọọdụ (dijitalụ ma ọ bụ graphic), enwere ike igbanwe faịlụ site na ndị enyi, enwere ọrụ iji nweta akwụkwọ echekwara na diski ikuku, mepụta faịlụ TXT, nyefee faịlụ site na iTunes na site Wi-Fi. Ngwa nnwere onwe nke ngwa ahụ ọ bụghị nanị na-egosipụta mgbasa ozi, mana enwekwara ohere ịnweta ọrụ ụfọdụ. A pụrụ iwepụ mmachibido dị ka ịkwụ ụgwọ otu oge, ya mere ịlele ahịa.
Bido akpa nkata
Ngwaọrụ ụwa maka ịgbakwunye, ịlele na ịchekwa faịlụ dị iche iche na iPhone gị. Ihe ndị dị mkpa gụnyere nchedo paswọọdụ, nkwado maka ihe karịrị 40 faịlụ faịlụ, na-arụ ọrụ na folda, ịmepụta faịlụ ederede na ụda olu, ịbịpụta site na isi mmalite dị iche iche, wepụ data sitere na ebe nchekwa, nakwa dịka onye ọkpụkpọ mgbasa ozi.
Enwere m obi ụtọ na ndị mmepe na-aṅa ntị na atụmatụ nke interface na nkwado nke asụsụ Russian. Ọ bụrụ na ụdị Njikwa Njikwa adịghị adabara gị, enwere ohere ịgbanwere isiokwu ahụ. A gaghị enwe ike ikwu ụta maka enweghị ọrụ, ma site na ịgbanwu PRO, ị ga-enwe ike ịnyefe data n'etiti ngwaọrụ iOS site na Bluetooth, ịgbanwere ozi site na FTP, WebDAV, Samba, na onye ọkpụkpọ ahụ ga-akwado ịkpọ egwu egwu niile na ụdị egwu vidiyo.
Download File Hub
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ihe dị mfe, ma n'otu oge ahụ ọrụ faili njikwa maka iPhone, jide n'aka na ị ga-ege ntị na USB Disk SE. Ngwa a bụ ihe odide ụwa na ndị na-ekiri ihe na mgbasa ozi na ikike iji budata faịlụ sitere na isi mmalite - ma ha bụ faịlụ echekwara na kọmputa ma ọ bụ na nchekwa igwe ojii.
N'ime atụmatụ bara uru nke USB Disk SE, anyị nwere ike ịmepụta ikike ịmepụta faịlụ, gbanwee nhọrọ ngosi maka akwụkwọ, gosi faịlụ zoro ezo, ịchekwa cache iji chekwaa ohere na ngwaọrụ ahụ, yana ikikere n'efu na ezughị oke mgbasa ozi.
Download USB Disk SE
Onye njikwa faili, nke nwere ikike nke onye na-edebe ihe nchekwa, onye na-ekiri ụdị faịlụ na ngwaọrụ dị iche iche maka ịnweta nchekwa dị n'ime iPhone gị. Na-enye gị ohere iji chekwaa ụfọdụ faịlụ na paswọọdụ na folda pụrụ iche, tinye akwụkwọ maka ibe edokọbara, mbubata faịlụ site na iTunes, iCloud na WebDAV. Dị ka mgbakwunye dị mma, enwere nkwado maka AirPlay, nke ga-egosipụta onyinyo, dịka ọmụmaatụ, na ntanetị TV.
N'ụzọ dị mwute, ndị mmepe anaghị elekọta nlezianya nke asụsụ Russian (nyere ọnụ ọgụgụ nke ihe ndepụta, nzaghachi a dị ịrịba ama). Tụkwasị na nke ahụ, a kwụrụ ụgwọ ahụ, mana ịnweta oge ikpe ikpe 14, nke ga-eme ka ị mara ma ọ bụrụ na FileBrowserGO kwesịrị ilebara anya.
N'ihe dị nso nke usoro sistemụ iOS, ndị nchịkọta faịlụ maka iPhone enwere ohere dị iche iche karịa, kwuo, maka gam akporo. N'ọnọdụ ọ bụla, ngwa dị otú ahụ kwesịrị ịdị na ngwaọrụ gị, ma ọ bụrụ na ọ bụla n'ime ha bụ ngwá ọrụ zuru ụwa ọnụ maka ịlele ụdị faịlụ dị iche iche.